अक्षय र अनमोलको भिडन्त एकसाथ, फ्यानको साथ कसलाई? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ अक्षय र अनमोलको भिडन्त एकसाथ, फ्यानको साथ कसलाई?
अक्षय र अनमोलको भिडन्त एकसाथ, फ्यानको साथ कसलाई?
पुलेसो १० माघ, २०७७, शनिबार १४:४९
नेपाली सिने जगतमा बलिउड फिल्महरुको हालीमुहाली कायमै रहेका बेला दर्शकहरुको प्रतीक्षामा रहेका फिल्म ‘कृ’ र ‘प्याडम्यान’ एकसाथ रिलिज हुने भएका छन्। कलिउड स्टार अनमोल केसी र बलिउड स्टार अक्षय कुमारको भिडन्त नेपाली पर्दामा एकसाथ हुने भएको हो।
बलिउड फिल्म पद्मावतको रिलिज डेटबाट प्रभावित हुँदै अक्षय स्टारर प्याडम्यानको आफ्नो रिलिज डेट गरेको छ। यसअघि जनवरी २५ का लागि रिलिज मिति तय गरेको प्याडम्यानले आफ्नो मिति हेरफेर गर्दै फेब्रुअरी ९ लाई तय गरेको हो। शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अक्षयले फिल्मको रिलिज डेट पोस्टपोन्ड गरेको जनकारी गारएका थिए।
प्याडम्यान रिलिज डेटको असर भने नेपाली सिने नगरीमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ। माघ २६ अर्थात् फेब्रुअरी ९ मा कलिउड स्टार अनमोले केसी अभिनित कृ पनि प्रर्दशनमा आउँदैछ।
अभिनेत्री श्वेता खड्काको कान्छीको प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्डपछी सोलो रिलिजको मौका पाएको कृ का लागि बलिउड फिल्म प्याडम्यानको पछिल्लो निर्णय निकै भारी पर्ने देखिन्छ।
नेपाली दर्शकका लागि जति अनमोल प्रिय छन्, बलिउडका अक्षयका फ्यान र फलोअर्स पनि नेपालमा उतिकै भेटिन्छन्। त्यसैले पनि सर्वाधिक प्रतीक्षाको फिल्म कृ को भविष्यमाथि यतिबेला सबैको ध्यान मोडिएको छ।
हुन त नेपालका त्यस्ता स्टार हुन् अनमोल, जतिबेला उनका फिल्म नेपाली हलमा छाउँछन् त्यतिबेला बलिउड फिल्मका लागि नेपालमा दर्शकको खडेरी नै पर्ने गरेको छ।
यसैको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ– अनमोल अभिनित ‘ड्रिम्स’। यो फिल्म नेपाली हलमा लागिरहेको बेला प्रियंका चोपडा अभिनित ‘जय गंगाजल’ नेपाली पर्दामा थियो। तर हल सञ्चालक जय गंगालालबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
अनमोलका अलावा प्राय: बलिउडका अपेक्षित फिल्महरुको प्रदर्शन मितिसँग अन्य नेपाली फिल्म भने प्रतिश्पर्धाबाट तत्काल पन्छिने गरेका पाइन्छन्। केही समयअघि फिल्म पद्मावतको रिलिज डेटका कारण ह्याप्पी डेजको मिति सारियो। त्यस्तै रजनीकान्तको ०.२ को रिलिज डेटका कारण फिल्म लिलिबिलीको समेत प्रदर्शन मिति हेरफेर गरियो।
यसले के बुझिन्छ भने नेपाली फिल्म इन्ड्रस्टी बलिउडसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम छैन। अथवा बलिउडसँग दाँजेर हलसम्म पुग्ने दर्शकहरुको मन नेपाली फिल्मले जित्न सकिरहेका छैनन्।
त्यसो त हलवाला र वितरकहरुले नेपालमा नेपाली फिल्महरुलाई भन्दा बलिउड फिल्मलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको पाइन्छ। कलिउड र बलिउड फिल्महरु एकसाथ प्रर्दशमा आए तापनि बलिउडले नै बढी प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। बलिउड फिल्मकै लागि बढी हल र ‘शो’टाइम प्रदान गरिने गरिएको छ। तर अपेक्षा र स्टारडमकै आधारमा हेर्ने हो भने अनमोलको कृ र अक्षयको प्याडम्यान प्रदर्शनमा यस्तो नहोला कि!